Su'aalo cusub oo horyaala Amisom - BBC Somali
Su'aalo cusub oo horyaala Amisom
9 Febraayo 2016
Ciidammada nabad ilaalinta ee Midawga Afrika ayaa wajahaya su’aalo cusub, arrintaas oo dabo socota weerarkii ciidammada Kenya lagu qaaday bishii hore ee ay Al-shabaab ku sheegteen in ay ku dileen in kabadan boqol askari.
Ciidammada Kenya wali ma aysan sheegin tirade kaga dhimatay weerarkii Ceel Cadde oo ku taala Koonfurta Soomaaliya laakiin waxaa laga yaabaa in ay tahay waxyeeladii ugu waynayd ee soo wajahda ciidamada nabad ilaalinta ee Midawga Afrika ee AMISOM loo yaqaano.
Weerarkaasi iyo dagaaladii u dambeeyay ee ku wajahnaa gacan ku haynta magaalo xeebeedka Marka ayaa xaqiijinaya in dagaalyahanada Al-shabaab aysan tabar gabin inkastoo Amisom ay dalka joogeen tan iyo sanadkii 2007-dii.
Ciidamadan waxaa la sameeyay iyaga oo gacan ka helaya Qaramada Midoobay si ay u yareeyaan halista Al-shabaab iyo in ay gacan siiyaan dawladda Soomaaliya.
Laakiin wali baahidii ayaa taagan.
Weerarkii Ceel Cadde kaddib ciidammada Amisom waxay ka baxeen magaalooyin dhawr ah oo ku yaala Koonfurta Soomaaliya, arrintaas oo ay masuuliyiintu ku tilmaameen xeelad dagaal.
Deegaanadaasi ayaa ahaa kuwo loo malaynayo in ay ahmiyad u lahaayeen Al-shabaab waxayna u muuqataa in ay iyagu buuxinayaan meelihii la baneeyay.
Weerarada lagu hayo ciidammadan Amisom oo ay tahay in ay ilaaliyaan dawladda Soomaaliya ee aan awoodda baadan lahayn ayaa walaac ku keenaysa dadka madaxda ka ah Midawga Afrika.
Dhibaatada soo gaadhay ciidammada Kenya waxaa ka horeeyay kuwo lala beegaday ciidammada Uganda iyo kuwa Burundi sanadkii hore.
Madaxwaynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa Shirkii dhawaa ee ay Midawga Afrika magaalada Addis Ababa ku yeesheen ka jeediyay baaq ku aadan in maalgalin dheeri ah la siiyo ciidammada Soomaaliya.
Ciidammada qalabka sidda ee gudaha Soomaliya way soo dhawaynayaan in taageero dheeri ah lasiiyo kama xishoonayaan in ay sheegaan sababta ay halkaasi u joogaan.
Taliyaha ku meel gaarka ah ee Amisom, Nakibus Lakara oo booqqanaya goobtii uu dagaalku ka dhacay ee Ceel Cadde ayaa ka hadlay hawlgalkooda.
Wuxuu sheegay in Amisom aysan ku jirin nabad ilaalin ee ay ku jirto hawlgal dagaal.
Wuxuu intaas ku daray in dagaal hadii la galo ay waxyeelo ay ka dhalato, muhiimaddu Amisom ay tahay in dhibaatada la yareeyo intii la awoodo.
Lakiin sawirka wayn ayaa muujinaya in siyaasiyiintu ay ka walwalaan sida ay wax u socdaan.
Inkasta oo Kenya dhibato soo gaartay haddana Madaxwayne Kenyatta wuxuu ku adkaystay in dalkiisu uusan is dhiibaynin uuna sii wadi doono hawlgalka ay ka wadaan Soomaaliya.
Waxaa jira dad Kenyan ah oo ku baaqaya in ciidammadooda laga soo saaro Soomaaliya, laakiin madaxwaynuhu wuxuu doonayaa in laga baaqsado in ay baneeyaan goobaha ay joogaan oo Al-shabaab dib u qabsadaan ayna la yimaadaan halis gobolka oo dhan soo food saarta.
Sagaal sano oo Amisom ay hawl galaysay waxay ku guulaysteen in ay dhul badan ka qabsadaan ayna deegaano badan dib uga riixaan iyaga oo sidoo kalana caawinayay dawladda Soomaaliya, laakiin taasi ma aysan joojinin dagaaladii.
Cabdullaahi Boru oo ka faalooda ammaanka iyo siyaasadda Afrika ayaa qaba in loo baahanyahay shay lagu cabiro guulaha Amisom ee Soomaaliya.
Wuxuu leeyahay cudud millitari oo kali ah xal ma aha ee waxaa loo baahanyahay in la kasbado dadka Soomaaliyeed haddii aan taas la helinna ay khasaare noqonayso dadaalkii Amism.
David Wagacha oo ka tirsan Paradec research consultancy oo cilmi baadhis sameeysa ayaa sheegaya in loo baahanyahay in ciidammada dawladda Soomaaliya loo suurtagaliyi in ay iyaga oo kali ahna la dagaalami karaan Al-Shabaab taas oo aysan hadda awood u lahayn.
Laakiin waxaa in laga hadlo u baahan kala aragti duwanaanta Amisom.
Xiligan Soomaaliya way kala qaybsan tahay taasina waxay muujinaysaa in aysan meesha ka jirin is aaminaad.
Wagacha wuxuu leeyahay inkasta oo meelo badan laga qabtay Al-Shabaab haddana waxaa muuqata in aysan isku xirnayn qaybo ka mid ah Amisom, isla markaasna aysan isku kalsoonayn oo mid walba danihiisa oo kali ah uu fiirsanayo.
Waxa jirta baahi loo qabo in dib u eegis lagu sameeyo Amisom kahor inta gollaha ammaanku uusan ka wadahadlin mudo u kordhinta Amisom.